नगद बस्टर टावर |
तत्काल जीत खेल को प्रशंसक? हामी छ सबै भन्दा राम्रो तत्काल जीत खेल तिम्रो लागि. को जो जुन kinase गेमिङ सफ्टवेयर विकासकर्ताले देखि नगद बस्टर टावर केही साँच्चै रोचक सुविधाहरू भरिएको छ. यो सबै रील टावर्स मा ब्लक कताई र जलाएर बारेमा छ. केही साँच्चै राम्रो रंग यस खेलको इन्टरफेस डिजाइन प्रयोग गरिएको छ. यो मूल नगद बस्टर खेल गर्न उत्तराधिकारी छ. यो सबै भन्दा राम्रो तत्काल जीत खेल माथि £ गर्न 10,00,000 को एक नगद पुरस्कार छ. त्यहाँ केही अचम्मको बोनस खेल पनि खेलाडीहरू दिइएको हो. पृष्ठभूमि संगीत रूपमा यो अचम्मको खेल को नजर रूपमा मजा छ.
नगद बस्टर टावर विशेषताहरु सबै भन्दा राम्रो तत्काल जीत खेल
यो सर्वश्रेष्ठ तत्काल विन खेल केही साँच्चै रोचक सुविधाहरू छ र यसलाई सबै बुझ्न जटिल छैन. यो सम्पूर्ण हरेक स्पिन मा भंडाफोड आइरह्यो कि अलग अलग रंग ब्लक को टावर आसपास घूमती. त्यहाँ प्ले दुई फरक मोड हो. स्क्रीन स्पिन बटन र पृष्ठको बायाँ-हात पक्षमा spins संख्या छ. केन्द्र मा, त्यहाँ तिनीहरूलाई प्रत्येक तिनीहरूलाई को शीर्ष मा उल्लेख पुरस्कार राशि भएको संग ब्लक छन्. सही-हात पक्षमा संकलित तारा र तीर को संख्या देखाउँछ कि तालिका छ. तपाईं क्लिक गरेर बाजी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ + र – स्क्रिनमा बटन.
सर्वश्रेष्ठ तत्काल विन गेमप्ले
यो को गेमप्लेको सर्वश्रेष्ठ तत्काल विन खेल धेरै यसलाई देखिन्छ भन्दा छरितो छ. तपाईं के गर्न आवश्यक सबै रील र कि रील मा देखिन्छ संख्या स्पिन टावर्स देखि ब्लक को कि नम्बर नष्ट हुनेछ. त्यहाँ एक सामान्य प्ले र दोहोर्याउनुहोस् प्ले खेल मोड छ. सामान्य प्ले मोडमा, दिएको हो5प्रत्येक शर्त र संख्या देखि लागि spins 1-6 टावर्स तलको रोल मा देखाइएको छ. त्यहाँ तीन विशेष प्रतीक हो; तारा, सर्कल र तीर प्रतीक. यदि तपाईं 4-तारे प्रतीक प्राप्त, यो तारा बोनस खेल क्रियाशीलता. तीर प्रतीक फेरि सारा टावर ब्लक refills र सङ्कलन भने4यी को, तीर बोनस खेल रूपबाट. सर्कल प्रतीक सर्कल बोनस तालिका मा खण्डहरूमा भर्नु भइरहनेछ.
तपाईं सामान्य प्ले मोडमा केहि जित्यो छैन भने त तपाईं दोहोरिने प्ले सुविधा भनिन्छ यसलाई अन्त मा एक मुक्त स्पिन दिइनेछ. कि स्पिन मा रील सामान्य प्ले सुविधा जस्तै नै कुरा देखाउन हुनेछ; म-6 नम्बर, एक तारा प्रतीक, तीर प्रतीक वा एक सर्कल प्रतीक वा तत्काल पुरस्कार राशि.
यो सर्वश्रेष्ठ तत्काल विन खेल केही साँच्चै अचम्मको ग्राफिक्स र एक captivating पृष्ठभूमि ध्वनि छ. को गेमप्लेको धेरै रोचक छ र एक लामो समय को लागि खेलाडी मुग्ध राख्न निश्चित छ. बोनस प्रतीक आधार खेलको winnings अलग्गै केही अतिरिक्त नगद बनाउन ठूलो तरिका हो.